အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: August 2008
ဒါတို့ ရဲ့မြေ ဒါ ဒို့ ရဲ့ပြည်။
ဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့ ဒို့ ဘိုးဘွားတွေ..
သတ္တိခြုံ တဲ့အခါ..လူ့ ဘဝက လုံတယ်။
သေမှာ ထိတ်လန့် တတ်ပါတဲ့ အမျိုး
ကြောက်တတ် တာ မဟုတ်ဘူး..
သူတို့ လည်း ကြောက်ဒူးတုန်ဘူးတယ်။
တိုင်းပြည်ကို လွတ်လပ်စေချင်တာ.တကဲ့ မျိုးချစ်စိတ်..
အသက်နဲ့ ဘဝကို လဲ..
ဘိုးဘွားတွေ ကြောက်ကြသော်လည်း ဘဲ
ယနေ့မှာသင်သည်လူကြီး..
စစ်ကျွန်အဖြစ်..နွံ့မနစ်..
ဘိုးဘွားတွေ ကိုယ်ကိ်ျုးစွန့် သမျှ..
ဒို့ ခေတ်ကျမှ..နောက်တွန့် ကြသလား..
သေတနေ့မွေးတနေ့ ..
အမှန်တရား အတွက်..ဘေးပြေးတွေ့ 
မသဒ္ဓါ ( ၈။ ၂၇။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:01 AM0comments Links to this post
ဘ၀ နဲ့ မတန်တဲ့..
ဘယ်မလဲ ညီလေးနဲ့ ညီမလေး..
အခု ရှင်သန် နေတာလေးတစ်ခု
မနက်ဖြန် အတွက် အစာ..ဘယ်ကရမလဲ..
မနက်ဖြန်ဆက်ဖို့အသက်..ဘယ်သူ အာမခံရဲမလဲ..
အို နာ..သေရခြင်းရဲ့ ဒုက္ခ
ချစ်ခင်သူ အားလုံးက သေပွဲ..
သူ တစ်ယောက်ထဲ ရှင်သန်စေ..
သူ တစ်ယောက်ထဲ ကျန်နေ..
အထီးကျန်ကြေကွဲ နာကျင်တာ လူမသိ..
ဝလုံး..ပကတိ။ ဘဝက နတ္ထိ၊
“ဒါ သူတောင်းစားဖြစ်၏ “ လို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:23 AM0comments Links to this post
ရွှေဥ ဥတဲ့ ငန်းကလေး
သခင်က သူဌေး ဖြစ်ခဲ့တယ်..
ပေးနေတဲ့ တနေ့ တလုံးသော ဥ..
စောင့်နေကြာတယ်။ သူ့ ရင်ခွဲ..
ရွှေတွေ အများကြီးတွေ့ မှာဘဲ”
မတွေ့ ရ..ငန်းသာ ဆုံး..
ပုံပြင် ရဲ့ နိဂုံး
ရွှေတွေလည်းရှုံး.. ငန်း သေဆုံး
ကောင်းရာမွန်ရာနဲ့မထိုက်တဲ့ အခါ.
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:06 AM0comments Links to this post
Labels: poem, Truth
တောင်းဆိုဆဲ မွေးရာပါ လူ့ အခွင့်အရေး.
"စစ်အာဏာရှင် ပျက်သုန်းရေး..ဒို့ အရေး
လူအချင်းအချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။"
လက်မရွံ့ ပါးကွက်သားရဲ့ တုတ်ဖျားမှာ.
၄၈ နာရီ အချိန်ရှိတယ်။
ဒါ လူတွေ အသက်..ပုရွက်ဆိတ်မဟုတ်ဘူး။
ဖေါ်ထုတ်ရမဲ့အသိ လူကြီးလုပ်ပြီး မသိဘူးလား။
ငါ တကောကောတဲ့..သန်းရွှေ ဗမာရှင်ဘုရင် တဲ့..
သောက်သောက်လဲသေတာ မရေနိုင်တဲ့ အသက်.
သားကွဲ မယားကွဲ. အဖေအမေကွဲ
ကြားရတဲ့ အဖေ ကယ်ပါ အသံ
မိမိ မိသားစုသာ ထိ..မင်းပျော်နိူင်ပါ၏ လား။
ခုထိ မင်း လည်ချောင်းဖျားမှာ
ခုထိ မင်း အစာအိမ်ထဲမှာ။
ခုတော့ လှိုင်းအလွန်ရွံ့ ဗွက်ထဲ..
မိဘမဲ့ ဆွေမျိုးမဲ့ ခိုရာမဲ့
မသဒ္ဓါ ( ၈။၁၆။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:27 PM 1 comments Links to this post
၁၉၆၂ က .ဂန္ဓ၀င်တွင်တယ်။
ကွေးသောလက် မဆန့် မီ..သေပျောက်ကြတာ။
ကြာခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀..
အပြင်နေတဲ့ သူရဲ့ ရက်များကကုန်လွယ်..
နာရီ လက်သံတို့ တချက်ချက်
ဒီလိုဘဲ..အသံကြောင့် ဖားတွေသေရ တော့မလား..
ဒို့ ဗမာရဲ့ ယောက်ျားဘသား..
နှစ် ၂၀ ဆိုတဲ့ရက်..
သွေး..ဘယ်နှစ်ဂါလံနဲ့ဗမာမြေကိုဆေးပြီးပြီလည်း..
သင့် အစွမ်းအစ တစ်စုံတစ်ရာ ပါပါရဲ့လား..
ဒေါ်စု ရဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့ရက်..
အာဇာနည်များရဲ့ ထပ်မြေခမဲ့ အသက်..
အားတူ တူတူ ရုန်းမှ..
မသဒ္ဓါ ( ၈။ ၁၄.၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:05 AM0comments Links to this post
မကျဆုံးတဲ့ ဝိညာဉ်များနဲ့ဒို့ အတူတူ.
ဆရာစံရဲ့ ဂဠုန် စိတ်ဓါတ်.
ကြိုးစင်ပေါ်မှာ အခုထိ ရပ်နေဆဲ။
ဒို့ နဲ့ အတူ ရှိနေ၏။
အောင်ဆန်းရဲ့ ဘာမထီ စိတ်အင်အား..
အရိပ်လို .ဒို့ အနောက်ပါးမှာ။
ဗကသ စိတ်ဓါတ်တွေပြိုမယ် မထင်နဲ့ 
၇ ဇူလိုင် မန္တလေးဆောင် သွေးစွန်းနံရံကို ရေဆေး.
ဒေါင်းသွေးတွေ ပျက်ပြယ်တယ်မထင်နဲ့ ..
ဦးသန့်မှိုင်းရာပြည့်..
သေနတ်တွေ့ တိုင်းကြောက်မယ်မထင်နဲ့ ..
ရွှေတိဂုံ ဗဟန်းက သံဃာသွေးစက်လက်..
မြန်မာ့ ရာဇ၀င်ရဲ့ အမည်းစက်..
အမေစု ကို အိမ်ထည်း ဖမ်းချုပ်လည်း..
မွေးဆဲ..မွေးလတ္တံ့အာဇာနည်ဒေါင်းတွေ..
ဘယ်လောက် ဟော့ရှော့ ဘဲဖြစ်ဖြစ်
စစ်သား ထက်တော့ ပြည်သူ့ ကိုချစ်တယ်။
ကျရာပေါက်ကြတာ သူ့ ဓလေ့
စစ်တက္ကသိုလ် ဆင်းမှ..တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်နိူင်တာမဟုတ်။
ဒ်ို့ သွေးနဲ့ စတေးထပ်.
ဒို့ မြေကို.မျိုးဆက်သစ်သို့ အပ်မဟဲ့
လွင့်နေတဲ့ အာဇာနည်များရဲ့ ဝိညာဉ်..
ဒို့ အားလုံး တူတူပင်..
မသဒ္ဓါ ( ၈။၁၃။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:03 AM0comments Links to this post
မနေ့ တနေ့ ကလိုဘဲ..
မနက်တိုင်း ပြူတင်းပေါက် လာဖွင့်နေကြအခန်း..
အေးစက် အိပ်သူမဲ့ အိပ်ယာ.
စင်ပေါ် သူရထားတဲ့ ဆုတံဆိပ်များ
နံရံပေါ်က ဖိုဘီကိတ်ရဲ့ ပိုစတာ..
ကန်နေကျ ဘော်လုံးလေးက ကုတင်အောက်မှာ။
သူ့ အဖေပေးတားတဲ့ ဝိတ်ပြားတစုံ
ခေါက်ရိုးကျ ပုဆိုးစိမ်းနဲ့ ကျောင်းအင်္ကျီဖြူ
ဖိနပ်စင်ပေါ်က ကတ္တီပါသဲကြိုးနဲ့ ဖိနပ်။
၁၅ နှစ်သားကလေးရဲ့ လူပျိုပေါက်အခန်းကလေး..
အော်…နှစ် (၂၀ )တောင်ကြာပေါ့။
၁၉၈၈ ရဲ့ ရက်..
ဒို့ အရေးအော်မဲ့ ၁၅နှစ်သား..
သွားသမျှ သားတ်ို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်
လေမွန်းကြပ် အချုပ်ကားထဲဘဲ သေသွားသလား
နားစွင့် နေ့ စဉ်..ကြေကွဲတဲ့ရင်..
“ အမေ ..အမေ အိပ်နေပြီလား..
အုပ်အုပ် တိုးတိုးလေး ပြောမဲ့ သားအသံ..
နားစွင့်ရင်းနဲ့ နှစ် (၂၀)..
ဆံပင်တွေဖြူ ပါးရည်တွန့် ..
မွဲမှောင် အသားအရည်နဲ့ .
ရီဝေတဲ့မျက်လုံး
မမြင့်တမြင် နဲ့ အမေအို..
မသဒ္ဓါ (၈။၈။၂၀၀၈) အာဇာနည် ဒေါင်းမိခင်များသို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:11 AM 1 comments Links to this post
စဉ်ထာဝရ မေ့ မရ..တဲ့ ၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။ အပိုင်း
စဉ်ထာဝရ မေ့ မရ..တဲ့ ၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။ video (၈၈၈၈) ကို download လိူပါက ဒီမှာ.ယူကြပါ။
Part 1. http://www.mediafire.com/download.php?aaazgam9azk
Part 2. http://www.mediafire.com/download.php?wgaqiylgugf
Part 3. http://www.mediafire.com/download.php?fyzqwe2pcgn
Part 4. http://www.mediafire.com/download.php?ilvszqotyww
Part 5. http://www.mediafire.com/download.php?sj57zkglnra
Part 6. http://www.mediafire.com/download.php?aw3blmpwvdx
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:21 PM0comments Links to this post
video file လိုချင်သူများရှိပါက..ဆက်သွယ်ပါ
၈၈၈၈ အတွက် မသဒ္ဓါ တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ဖြတ်ညှပ်ကပ်၍ အချိန်မအားသည့်ကြားမှ video လုပ်ထားပါသည်။ ၈- ၈- ၀၈ အတွက် တွင်သုံးလိူသူများ မူရင်း Video ဖိုင်လိူချင်က ဆက်သွယ်ပါ.။ ညနေ အိမ်အပြန်. download လုပ်ရန် link ပေါ်တင်ပေးပါမည်.
ဆက်သွယ်ရန် ။ thadarmay@gmail.com
နောက် ၁၅ နာရီအတွင်း ရနိုင်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:31 AM0comments Links to this post
လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖြူဌက်..
ဦးသန့်မှိုင်းရာပြည့်.
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ သို့ 
သွေး နဲ့ ရင်းနှီးတယ်။
ဒုနဲ့ဒေး။ အာဇာနည်သွေးတွေ ..မြေခကြွေ။
အနှစ် (၂၀)ခြောက်လှန့် အိပ်မက်တွေ
ဒို့ ဘိုးဘွားလက်ထက်..မပျက်ခဲ့တဲ့ သာသနာ
ဒို့ ခေတ်ကျ မှ သာသနာပျက်..
မျက်နှာကို ဓါးနဲ့သာ နုတ်နုတ်စင်း
ကျွန်ပါးဝ သောက်သုံးမကျတဲ့ စာရင်း
ကျမနာမည် လည်း ပါတယ်။
ပုဇွန်ဆိတ်ကလေး တကောင်မို့ 
အားနဲ့ သာခဲ တွန်းပါလှည့်
ပြိုင်တူတွန်းနိူင် ရွေ့ နိုင်ပါရက်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:13 AM 1 comments Links to this post
နှစ် ( ၂၀) မြောက်..၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။
ပြာပုံက ပြန်နိုး ထပျံတော့မဲ့ မီးဌက်....
တဖန် ...ခွပ်ကြစို့ လား ဒို့ ဥဒေါင်းဌက်
နှစ် (၂၀) က ကျဆုံးခဲ့သော ရဲဘော်အပေါင်းအား အလေးပြုအမျှဝေပါသည်။
စဉ်ထာဝရ မေ့ မရ..တဲ့ ၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။ အပိုင်း (၁)
စဉ်ထာဝရ မေ့ မရ..တဲ့ ၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။ အပိုင်း (၂)
စဉ်ထာဝရ မေ့ မရ..တဲ့ ၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။ အပိုင်း (၃)
စဉ်ထာဝရ မေ့ မရ..တဲ့ ၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။ အပိုင်း (၄)
စဉ်ထာဝရ မေ့ မရ..တဲ့ ၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။ အပိုင်း (၅)
စဉ်ထာဝရ မေ့ မရ..တဲ့ ၈၈၈၈ ၏ ပုံရ်ိပ်များ။ အပိုင်း (၆)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:03 PM0comments Links to this post
Labels: poem, Politics, video
ကုန်လွန်တဲ့နှစ် (၂၀ ) သို့ခြင်္သေ့လည့်ပြန်..ရိုင်းနေဆဲ ကာရန်။
တနေ့ မှာ ပျောက်ဆုံး..
ဖုန်မှုန့် တွေလို လေမှာဝဲ.
အနှစ် (၂ဝ ) ဆိုတာတခဏ။
လွတ်လပ်ရေးသို့အဖြေတခုရှာ..
၈၈၈၈ က ဂန္ဓ၀င်ဘဲ။
သမဂ္ဂကို ဗုံးခွဲ ရှင်း။
ပစ်ရင်မှန်အောင် ပစ်တဲ့ စစ်တပ်
အခု ပြည်သူ သတ်လာတာ. နှစ် (၂ဝ)
ဘုန်းကြီး သတ်လာတာ. နှစ် (၂ဝ)
မုဒိန်းတွေ ကျင့်လာတာ နှစ် (၂၀)
ဒီနှစ် (၂၀) ကိုပြန်ကြည့်..ပြကြည့်ပါ။
ဘာတွေ တိုးတက်လာတာ ရှိသလည်း..
ကဲကဲ ..စစ်တပ်..မင်းတို့ လည်းစာတတ်..
ဘယ်ဘက်မှာ မင်းတို့ ရပ်မည်။
ရမဲ့ ထိပ်ဆုံးက ခေါင်းဆောင်နေရာ..
ကောင်းစားမဲ့ ခိုးရတဲ့ နေရာ..
လက်ချိုးရေ လူ ၁၀၀ တောင် မရှိတဲ့ အခါ..
အဲဒီထဲ မင်း ပါ မှာသေချာလား..
တနေ့ မှာ..မင်းလည်း ဘ၀ပျောက်မယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:49 AM2comments Links to this post
ဥဒေါင်းမျိုးမှန်..ဇွဲစိတ်မာန် မလျှော့ကြစေနဲ့ 
နှစ် (၂၀) မပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေး..
ဒို့ သွေးချွေးနဲ့ဆက်ရေးမယ်..
ဥခွံထဲက ပေါက်လုလု ခွပ်ဒေါင်း..
သို့ လော သို့ လော..
ဆင်ခြေပေးစရာ တွေးမနေပါနဲ့ ..
ခလေးတွေ ပျော်ရွှင်စွာ ရယ်မော
ငို...မျက်ရည် ခမ်းကြစေဖို့ 
လူလူ ချင်း သာတူညီမျှ
အခွင့်အရေးတွေ ရရှိစေဖို့ 
အမိမြေကို စောင့်ရှောက်ကြစို့ ။
ဒို့ သာ တော်လှန် မှ..ဒို့ လွတ်လပ်ရေး ရ..
ဒို့ သာ ညီညာမှ ..ဒို့ အခွင့်အရေး ရ..
ဒို့ တည်ဆောက်မှ ဒို့ အနာဂတ်လှ..
မသဒ္ဓါ ( ၈။၂. ၂၀၀၈)
နှစ် ( ၂၀ ) ကျမတို့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့သော တော်လှန်ရေး..အပြီး သတ်ကြရန်..မျိုးချစ်များအားလုံးသို့ လက်ကမ်းပေးပါသည်။ ပါဝင်ကြပါ။ တူတူ ခွပ်လိုက်ကြပါစို့သူုငယ်ချင်း။ ဥဒေါင်းတွေ ခွပ်ရှိန်ပြင်းဖို့ လိုပါပြီ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:44 PM3comments Links to this post
ကုန်လွန်တဲ့နှစ် (၂၀ ) သို့ခြင်္သေ့လည့်ပြန်..ရိုင်း...